Geriatric Emotional Support - My Doctor " );( document.contains ) || document.write( "" );( window.DOMRect ) || document.write( "" );( window.URL && window.URL.prototype && window.URLSearchParams ) || document.write( "" );( window.FormData && window.FormData.prototype.keys ) || document.write( "" );( Element.prototype.matches && Element.prototype.closest ) || document.write( "" );( "objectFit" in document.documentElement.style ) || document.write( "" );
ကျွန်မတို့တက်ကြွစွာအလုပ်လုပ်သွားလာနေတဲ့အချိန်မှာ ကျွန်မတို့ အိမ်ပြန်ချိန်ကိုစောင့်ပြီး အထီးကျန်နေတဲ့လူတွေရှိပါတယ်။
ဒီလူတွေဟာ ကျွန်မတို့ရဲ့ အရင်းနှီးဆုံးသော မိဘ၊ သို့ အဘိုးအဘွားတွေပါပဲ။
တစ်ခါတစ်ခါ ကျွန်မတို့ဟာ လှုပ်ရှားရုန်းကန် ဘဝအတွက် အချိန်တွေပေးရင်းနဲ့ အနီးဆုံးလူတွေကို အချိန်တွေ မေတ္တာတွေပေးဖို့မေ့လျော့နေတတ်ပါတယ်။
မိဘတွေ အဘိုးအဘွားတွေကလဲ တစ်သက်တာလုံး ပေးဆပ်ပြီး ကျွန်မတို့ကိုချစ်လာခဲ့သူတွေမို့ ကျွန်မတို့ ဂရုစိုက်မှုကိုဖွင့်ပြောလေ့မရှိကြဘဲတိတ်တဆိတ်မျှော်လင့်နေတတ်ကြပါတယ်။
တစ်ခါတစ်ခါ လူကြီးတွေဟာ အလွန်အထီးကျန်လာတဲ့အခါမှာ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလိုအပ်မှုကနေစပြီး အိပ်မပျော်တာ ၊ အစားစားမဝင်တာ၊ ပုံမှန်လုပ်နေကျတွေကို အာရုံစိုက်ပြီး မလုပ်နိုင်တာ စတဲ့ လက္ခဏာတွေပြလာတတ်ပါတယ်။
ဒီလိုတွေ ဖြစ်လာတဲ့အခါ ကျွန်မတို့တွေ ဆေးခန်းပြရုံ၊ ဆေးရုံ လိုက်ပို့ပေးရုံနဲ့ တာဝန်ကျေပြီလား?
တကယ်တော့ မေတ္တာ၊ ဂရုစိုက်မှုပေးခြင်းဟာ ပိုမိုထိရောက်တဲ့ ကုသမှုတောင် ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
“ထမင်းစားကောင်းရဲ့လား? ” ” အမေ ဒီနေ့အဆင်ပြေရဲ့လား”
ဒီလိုမျိုးလေး တစ်နေ့တာအတွက် မေးခွန်းလေးတွေမေးပြီး သူတို့ကိုဂရုစိုက်ကြောင်းပြနိုင်သလို။
ကြိုက်တတ်တဲ့ မုန့်လေးတွေဝယ်ပေးလာတာမျိုးက သူတို့ကို ပျော်ရွှင်စေမှာပါ။
သူတို့ဟာ အရေးပါသူတွေဖြစ်ကြောင်း မကြာခဏပြောပေးပါ။
လူကြီးတွေရဲ့ စိတ်မလုံခြုံရခြင်းဟာ အသက်ကြီးလို့ ကျန်းမာရေးချို့ယွင်းလာ တာအပြင် သူတို့ကို သူတို့ အရေးမပါ အသုံးမဝင်ဘူးလို့ ခံစားနေရတာတွေကြောင့် လည်းပါ ပါတယ်။
သူတို့ အရေးပါကြောင်း ပြနိုင်အောင်
” အလုပ်ကအပြန် အမေ့ကိုတွေ့မှ အမောပြေတယ်” ဆိုတာမျိုးလေးတွေက ကျွန်မတို့ဘဝမှာ သူတို့အရေးပါကြောင်း သိသာစေပါတယ်။
အိမ်ထဲမှာနေပြီး တွေးတောနေစေခြင်းထက် သက်တူရွယ်တူ အပေါင်းအသင်းများနှင့် တွေ့ဆုံစေခြင်းက ပိုပြီး စိတ်ပျော်ရွှင်ပါစေလိမ့်မယ်။
အားလပ်တဲ့အချိန်လေးမှာ သူတို့နဲ့အတူတူ မနက်ခင်း လမ်းထွက်လျှောက်ပေးမယ်။ ညစာလေးစားပြီး စကားအတူပြောပေးမယ်ဆိုရင် မိဘတွေ၊ အဘိုးအဘွားတွေ စိတ်ရော လူပါ ကျန်းမာစေမှာအမှန်ပါပဲ။
နောက်ဆုံးပြောပြချင်တာကတော့ ကျွန်မတို့ မအားလပ်အောင် ရုန်းကန်လှုပ်ရှားနေတဲ့ကြားက ကျွန်မတို့ကို တစ်ဘဝလုံးပေးဆပ်လာတဲ့ အနီးစပ်ဆုံး မိဘ၊ ဘိုးဘွားတွေကို အချိန်လေးပေးပြီး ဂရုစိုက်ကြပါစို့လား။
Clock In Women